Ukuphupha ngeBagger Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Xa imingxunya enzulu kufuneka igrunjwe kwiindawo zokwakha okanye umhlaba kufuneka, i-excavator isetyenziswa njengesithuthi sokwakha.
Oomatshini abasebenzisekayo bafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye noyilo: Ngezinto zokumba ezincinci, into inokuphinda ilungiswe kwigadi xa i-horticulturist isebenza. Izinto zokumba ezinkulu zisetyenziswa ngokubanzi ekwakheni iindlela nasekwakhiweni kwezindlu, ngelixa ezembiwa zinkulu zisetyenziswa kwimigodi evulekileyo yomhadi. Unokufumana nesixhobo sokumba enkwalini.
Ukuba aba matshini bokwakha bavela kwi el mundo Amaphupha ahlala enomsebenzi obalulekileyo apho.
1 Isimboli yamaphupha «excavator» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «excavator» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-excavator» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha «excavator» - ukutolikwa ngokubanzi
I-excavator ayisetyenziswanga kuphela kwihlabathi lokwenza iwotshi ukumba emhlabeni. Nokuba kwihlabathi lamaphupha, into inokuziswa ekukhanyeni kwemini nge-bulldozer eyayifihliwe ixesha elide kwaye mhlawumbi ingafumaneki kwaphela. Ihlala ilixesha elide imfihlookungena umoya kulo mfanekiso unjengephupha.
Ngamanye amaxesha i-excavator inokuba luphawu kuphando lwamaphupha ophuphayo iindleko Ndifuna ukukhulula. Oku kunjalo ngakumbi xa i-excavator itshabalalisa into kwilizwe lamaphupha.
Kananjalo ugandaganda ephupheni uhlala ebonisa ukuba iphupha elo akufuneki lixakeke yimicimbi yabanye abantu. Kule meko, ukulala kuhlala kuninzi kakhulu kwihlabathi lokuvuka. ukubamba vumela.
Uphawu lwephupha «excavator» - ukutolikwa kwengqondo
Xa oomatshini bokwakha abanjengokumba okanye oogandaganda bevela kwihlabathi lamaphupha, bahlala befuzisela a amandla atshabalalisayo kubomi bamaphupha.
Uphando lwamaphupha ludla ngokutolika ugandaganda ngendlela efanayo nekayiti xa ivela ephupheni. Ke ngoko, umembi uphinde abuze iphupha ukuba inkalipho Kuya kufuneka ungene nzulu kwaye ungahlali kuphela kumphezulu, kuba kungoko kuphela apho izinto ezifihliweyo zinokuvezwa. Oku kuthetha ukuba iingxaki azicinezelwa kwaye amaxabiso angaphakathi kufuneka afumane ingqalelo ethe kratya.
Ukuba iphupha limba iqula lesiseko ngelixa ulele, ke oku kutolikwa njengophawu lokuba iphupha sele liza kubumba ubomi bakho kwakhona.
Ukuba ukuphupha kwilizwe lamaphupha kunkqonkqoza indlu nge-bulldozer, ke zama ukuphuma kuyo imithwalo emidala khululeka. Oku kubandakanya nemibono ephelelwe lixesha kunye neengcinga ezindala onazo. Ukuba iphupha lithatha i-excavator ngaphezulu kwepropathi ukuze liyicoce, iphupha elo ke linobomi balo kwihlabathi elivukayo. ulawulo.
Uphawu lwephupha «i-excavator» - ukutolika kokomoya
Ugandaganda ufuzisela oko ekutolikeni amaphupha okomoya. Ifihliwe.